Simple GIS Software: GIS site $ 25 ahịa na Web nkesa na-maka $ 100
Taa, anyị bi n'ihe nkiri na-atọ ụtọ, nke sọftụwia na enweghị ikike na-ebikọ ọnụ, na-enye aka na ụlọ ọrụ na ọnọdụ na-arịwanye elu nke asọmpi. Ikekwe esemokwu banyere ọnọdụ ụwa bụ otu n'ime mpaghara ebe ihe enyemaka ndị na-emepe emepe siri ike dịka azịza ikike enweghị ikike; mana o sina dị,…
Apụta, Geospatial - GIS, mbụ echiche
Bubata data site na OpenStreetMap ka QGIS
Onu ogugu data di na OpenStreetMap buru ezigbo ibu, obu ezie na emeliteghi ya nke oma, otutu oge o kariri ihe kariri data nke anakọtara site na akwukwo ihe osise na 1: 50,000. Na QGIS ọ dị mma ịkwanye oyi akwa a dị ka eserese dị ka foto Google ...
JOSM - A CAD maka edezi data na OpenStreetMap
OpenStreetMap (OSM) bụ otu n'ime ezigbo ihe atụ nke otu esi enye ozi na usoro mmekọrịta nwere ike iwulite ụdị ọhụụ nke ozi eserese. Yiri Wikipedia, ụzọ ahụ dị oke mkpa na taa maka geoportals ọ ka mma itinye akwa a n'azụ kama ichegbu onwe gị maka imelite ozi nke gị na akụkụ ...
Cartografia, mbụ echiche